घरमै बसी बसी फेसबुक बाटै महिनामा २०-३० हजार पैसा कमाउन चाहानुहुन्छ भने जानकारी लिनुहोस ... - Sudur Khabar
घरमै बसी बसी फेसबुक बाटै महिनामा २०-३० हजार पैसा कमाउन चाहानुहुन्छ भने जानकारी लिनुहोस …
तपाई लाई सुन्दै अचम्म लाग्न सक्छ तर यो कुरा सत्य हो कि फेसबुक देखि मनग्गे पैसा कमाउन सकिन्छ । हुन त हामी जति सुन्दा सजिलो मान्दछौ वास्तव मा त्यो त्यति सहज भने छैन तर पनि केहि सरल भने अवश्य छ । तपाई सँग फेसबुक मा प्रशस्त अडियन्स हरु छन् भने वा तपाई सँग मार्केटिंग को राम्रो जानकारी छ भने तपाई ले फेसबुक लाई आधार बनाएर राम्रो कमाउन सक्नु हुन्छ । तर यदि तपाई यो सँग सम्बन्धित मान्छे हुनु हुन्न भने यो कुरा लाई इग्नोर गर्दिनु होला । अब आउनुहोस फेसबुक देखि कसरी र कति पैसा कमाउन सकिन्छ ।
कसरि हुन्छ कमाई ?
फेसबुक मा हामी धेरै महत्वपूर्ण समय खेर फाली रहेका हुन्छौ तर समय को सदुपयोग गरे पैसा कमाइन्छ । सर्बप्रथम तपाई सँग एउटा वेबसाइट चाहिन्छ अनि वेबसाइट भैसके पछी त्यसमा आफु ले मोनेटाईज गरेर कमाउन सकिन्छ । साइट हुने बित्तिकै कमाई हुन्छ भन्ने छैन त्यसमा तपाई संग प्रसस्त मात्रा मा अडियन्स हरु हुन आवश्यक छ । जस्तो कि ग्रुप , पेज , अथवा बिज्ञापन द्वारा अडियन्स हरु बनाउन सकिन्छ । यसका साथ साथै तपाई ले स्थानीय नीति नियम र फेसबुक को पोलिसी अन्तर्गत रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तपाई ले कमाएको पैसा तपाई को आफ्नै बैंक खाता मा आउछ ।
कति हुन्छ त कमाई ?
यसै भन्न सकिन्न त्यो तपाई को मेहनत अनि लगानी मा भर पर्दछ । संसार मा कुनै पनि कुरा निशुल्क छैन तर तिर्नु पर्छ भन्दै मा बुझ्दै नबुझी लगानी गर्नु पनि हुदैन । सब भन्दा ठुलो कुरा तपाई को मेहनत हो तपाई को मेहनत र परिश्रम नै तपाई को पहिलो लगानी हो अनि अरु कुरा हरु जस्तो कि स्रोत र साधन हरु जुटाउन लाग्ने खर्च आदि ।
कमाउने हरु ले प्रसस्त कमाउन सक्छन यति भनेर भन्न सकिन्न यसको मतलब सायद अनलिमिटेड पनि हुन सक्छ तर यहाँ कुनै स्किम को बारेमा भन्न खोजिएको होइन तपाई को कमाई तपाई कै मेहनत र कार्यशैली मा भर पर्दछ ।
यो एक फेसबुकबाट पैसा कमाउने अमेरिका स्थित एक जना व्यक्ति को रिपोर्ट हो । जसको कमाई दैनिक ५०० डलर भन्दा बढी नै छ ।
सुरुवात कसरि गर्ने ?
यदि तपाई साच्चै इच्छुक हुनु हुन्छ र कमाउन चाहनु हुन्छ भने गुगल गर्न सक्नु हुन्छ अथवा हामी लाई भन्न पनि सक्नु हुन्छ हामी सँग सम्पर्क गर्न को लागि हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा इमेल गर्न सक्नु हुनेछ यदि तपाई लाई फोन मार्फत केहि जान्न मन छ भने हाम्रो फोन नम्बर ९८१३८९३८०८ मा फोन गरेर पनि सोध्न सक्नु हुनेछ । हामी तपाईलाई सक्दो जवाफ अनि सहयोग गर्ने कोसिस गर्ने छौ ।
ज्ञान लिनु र ज्ञान दिनु धर्म को त्यसै ले शेयर गर्नुहोला ।